Mamporisika ny fanafanana ny tany ny banky | Martech Zone
Talata, Aogositra 7, 2007 Alakamisy, Aogositra 9, 2007 Douglas Karr
UPDATE 8 / 9 / 2007: Tsy azoko antoka raha misy ifandraisany amin'ny lahatsoratry ny bilaogiko izany, saingy namerina ny $ 1.75 i Sky Financial ankehitriny.
Hafatra ho an'ny bankiko, Sky Financial:
Tamin'ny 8/3/2007 dia nandeha tany amin'ny Smith Valley ATM sy County Line ATM aho tamin'ny US31 ary samy tsy nisy asa fanompoana intsony ireo ATM roa ireo. Ankasitrahako ny fanesorana ny 08-03-2007 FANDAHARAM-PAHASOANA US US US $ 1.75 amin'ny vola XNUMX amin'ny kaontiko. Tsy nanana safidy hafa afa-tsy ny mitsidika ATM misy banky hafa aho.
Valiny avy amin'ny Sky Bank:
Mampalahelo fa tsy afaka mamerina ny saram-panompoana ATM avy any ivelany izahay. Misy toerana dimy hafa ao anatin'ny radius 5 kilometatra ao Greenwood. Raha mila hevitra misimisy kokoa momba an'ity raharaha ity ianao dia afaka miresaka amin'ny mpitantana ny Greenwood Financial Center.
Ary koa amin'ny fanakambanana ho avy miaraka amin'ny Huntington Bank dia afaka mampiasa milina ATM Hunington Bank ianao nefa tsy misy fiampangana serivisy velively. Misy 1,400 ATM izao eo anelanelan'ny Sky sy Huntington azonao ampiasaina.
Misaotra anao amin'ny banky miaraka amin'ny Sky Bank.
Izany no antony halako banky ary nahoana no tapitra ny adihevitra:
Aza misaotra ahy tamin'ny banky nataoko tamin'ny Sky Bank. Indroa aho no nanandrana nanao banky niaraka tamin'ny Sky Bank fa maty ny ATM-nao.
Ka antenainao tanteraka ny hanohizako mitondra fiara amin'ny ATM mankany ATM mandra-pahitako ny iray mandeha.
Tokony ho faly aho fa mbola hisy 1,400 fanampiny ny ATM mety tsy misy?
Raha efa hitanao hoe ohatrinona ny saram-pananako niaraka tamin'ireto lehilahy ireto dia ho sempotra ianao. Mampihomehy ny zava-misy fa tsy hanala tsiny $ 1.75 tsotra fotsiny izy ireo. Manantena aho fa ny departemantan'ny serivisy ho an'ny mpanjifa iray manontolo dia hihena amin'ny fanakambanana.
Ireto ny toerana dimy… mety, ha?
Apple eMac sy Microsoft XBox?
Aug 7, 2007 amin'ny 9: 08 AM
Oay! Tena sosotra ianao.
Toa nandoa be ianao
ny sarany. Avy amin'izay novakiako
hery lehibe eo amin'ny bilaogera ianao
izao tontolo izao. Mety hiantso anao izy ireo
hiverina tsy ho ela.
Aug 7, 2007 amin'ny 10: 24 AM
Eny, nampandeha ahy izy ireo! Tena tsy sosotra aho raha tsy novakiako ny valiny! Te hanana antoka aho fa azon'izy ireo ny $ 1.75 amin'izany. 🙂
7 Aogositra 2007 amin'ny 2:10 PM
Mila mandeha amin'ny banky an-tserasera ianao. Izaho efa niaraka tamin'ny banky Everbank nandritra izay 8 taona lasa izay. Averin'izy ireo ny $ 6 / mo amin'ny saram-bola ATM. Manome ny valopy fandefasana paositra mihitsy aza izy ireo handefasana ny tapakila.
Everbank koa dia manome endri-javatra lehibe hafa an-taonina izay azon'ny ankamaroan'ny banky kitihina.
Tsy mino aho hoe firy ny olona no mbola mampiasa ny banky biriky sy mortara. Tena tsy hitako izay dikany.
7 Aogositra 2007 amin'ny 3:15 PM
Mba hampahery anao fotsiny - tsia, tsia.
Holazaiko fa fotoanan'ny banky vaovao io, saingy tsy nihatsara ny toe-javatra. Ny hany hany safidinao dia ny miresaka amin'ny mpitantana banky eo an-toerana anao.
Ny ATM 1400 - izany dia 1400 eo anelanelan'ny banky roa, fa tsy 1400 vaovao, ary miely eo amin'ny fanjakana firy? Ary, efa nahita ATM Huningdon izay onenanao ve ianao? Mbola tsy nahita iray teto aho.
Ny bankiko kaontiko manokana dia any amin'ny Sky ihany koa. Efa namidy intelo na inefatra izy hatramin'ny nahatongavako tany. Tsy mbola nanana olana aho, fa tsy mampiasa ATM.
7 Aogositra 2007 amin'ny 10:36 PM
Heveriko fa ny tena manelingelina dia ny vidiny ambony indrindra amin'ny fiampangana serivisy. $ 1.50 ka hatramin'ny $ 1.75 isaky ny fifanakalozana? Heck, mila manala $ 100 farafahakeliny ianao indray mandeha mba hahatratrarana 1% ny minono!
Eto Canada dia tsy manana banky vitsivitsy fotsiny isika izay mahafinaritra, na izany aza, mihamaro ny ATM avy amin'ny banky tsirairay ary bebe kokoa ireo ATM tsy miankina mipoitra manerana ny toerana. ATM ATM any amin'ny banky vitsy kokoa ary ireo tsy miankina = sarany tolotra bebe kokoa…
Hitako hoe "ENY!" ho an'ireo miverina amin'ny vola rehefa anontaniana amin'ny fotoana fizahana ao amin'ny magazay - tsy misy sarany serivisy adala…. Ary inona ny heck amin'ny 'service charge'? Fiampangana CONVENIENCE izany. Ny bankiko dia miantoka ahy amin'ny serivisy - tsy tena azoko antoka hoe inona no azoko amin'izany…
Orinasa banky sy finday - ny bikan'ny fisiako.
8 Aogositra 2007 amin'ny 7:18 PM
Mampihomehy… Mieritreritra aho fa mbola manana kaonty Royal Bank of Canada any ambony any. Raha tsy nikatona ho an'ny sarany (izay angamba)… iza no mahalala, angamba tapitrisa aho! Indrindra fa mihalehibe noho ny volontsika ny loony!
Amena amin'ny banky sy ny orinasan-telefaona. Toa miha antitra ianao amin'ny maha orinasa anao dia vao mainka miharatsy ny fikarakaranao ny mpanjifa! Atsipazo any koa ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka.
8 Aogositra 2007 amin'ny 7:20 PM
@Rick: Banky banky goavambe aho, Rick. Heveriko fa izany no antony nahamaimaizaho ahy tamin'io. Nanokatra ny kaontiko tamin'ny Internet mihitsy aza aho! Tsy nandany vola zato isan-jato mihitsy izy ireo nitantanana ny orinasako.
@Randy: Tsara re fa tsara ny fitondran'izy ireo anao, Randy! Hanokatra kaonty amin'izy ireo aho.
Aug 9, 2007 amin'ny 11: 10 AM
Ny herin'ny bilaogy ve? Ny banky dia namerina ny $ 1.75 androany.
14 Aogositra 2007 amin'ny 5:27 PM
Ahoana no ahasahianao manao hevitra izay antenainao fa hihena ny serivisy ho an'ny mpanjifa iray manontolo noho ny fitambarana ??? Fantatrao, misy maro amintsika izay miasa any izay TIA ny hamerina anao rehetra ny sarany nefa tsy manam-pahefana hanao izany izahay. Misy olona an-jatony maro ho very asa. Ankizy an-jatony izay efa fanaon'izy ireo taloha no hiova be. Aza manao fanehoan-kevitra toy izany satria tsy azonao atao ny mandanjalanja miaraka amin'ny vola kely $ 1.75 ATM adala izay naverinao tamin'ny tranokalan'ny crybaby kely anao. Tsy lesoka amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa no nampangaina anao ary tsy izy ireo koa no tsy naverina tamin'ny laoniny. Tsara ny nataonao mba hamerenana azy io fa ny fanehoan-kevitra henjana dia nataonao ho an'ny olona diso. Afaka manome toky anao aho fa raha niresaka tamin'iza na iza amin'ireo solontenan'ny asa ianao dia hilaza aminao izy ireo fa TIA izy ireo hamerina anao ny sarany. Alohan'ny hitondranao ny vavanao momba ny olona dia fantaro ny zava-misyo alohan'ny hanorotoroanao ny olona mihoatra noho izay efa nanorotoro azy ny orinasa iray. Ny ankamaroan'ny olona very asa dia efa teo nandritra ny taona maro ary tsy hadisoan'izy ireo akory ny antony nandoavana sarany izay nanapa-kevitra ny handoa vola ny mpamatsy vola an'arivony sasany hahafahany manankarena. Ny tokony ho nolazainao dia ny manantena fa very asa ireo olona manao lalàna. Tsy mandray karama izahay ary mandray fanararaotana be dia be, fanararaotana kely fotsiny ny hevitrao. Ahoana no tianao raha misy milaza aminao rahampitso fa tsy manana asa intsony ianao? Na raha misy olona ao amin'ny fianakavianao lazaina fa misy orinasa hafa maka ny azy ireo ary tsy ho ilaina intsony izy ireo? Voa mafy izany. Aza manao hevitra mifototra amin'izay eritreretinao, ianaro ny zava-misy alohan'ny hanapahanao hevitra fa tokony hitady anay rehetra tsy hanana asa ianao.
14 Aogositra 2007 amin'ny 8:36 PM
Ny fomba tokana hanovan'ny orinasa dia avy ao anatiny. Raha nandao ny mpampiasa ratsy na orinasa ratsy ny mpiasa lehibe dia hampianatra lesona an'io orinasa io izy.
Raha tena te hanao zavatra momba izany ianao ary mino fa tsy rariny koa izany dia tokony hiala ianao fa tsy hanohana fikambanana toy izany.
Fantatrao ary fantatro fa ny Sky Bank (sy ny anarana teo aloha) dia mahazo vola be amin'ny olona mahantra mandoa vola sy lamandy. Tokony ho heloka bevava izany… fa raha mbola manana lemmings hanatanterahana ny baikony izy ireo, inoako fa tsy hiova ny raharaha.
Aug 16, 2007 amin'ny 5: 46 AM
Hiala? Mora ny milaza izany noho ny vita raha ny asa dia saika tsy exististant toerana onenako. Tsy misy asa any izay tsy manana politika / fomba hifanarahan'ny rehetra. Satria ianao miasa amin'ny orinasa izay tsy tonga lafatra dia tsy mahatonga anao ho olona ratsy. Ary ny serivisy ho an'ny mpanjifa dia tsy misy ifandraisany amin'ny $ 1.75 anao. Izahay tsy nanao an'izany. Ary mino aho fa mandoa izany sarany adala izany koa isika rehetra. Saingy tokony hiteny aho hoe, ny ankamaroan'ny banky no miantoka azy. Ary ny ankamaroan'ny banky dia manome vola anao hampiasa ny trosanao ao amin'ny magazay. SKY tsy, na izany aza, Huntington no manao. Ka hitanao fa misy politika marobe mitsentsitra sy izay any amin'izay alehanao. Azoko antoka fa misy olona miasa ao amin'ny Walmart afaka milaza aminao momba zavatra mahadona ao… .ka raha mandoa vola be loatra amin'ny entana iray izy ireo ve dia ny fahadisoan'ny olona satria mahatsapa ianao fa voaviravira? Raha ny fahitako azy dia mila mahita zavatra tsara kokoa hifanaraka aminao amin'ny fotoana ianao fa tsy manahy ny amin'ny $ 1.75 ary avy eo mihodina ary maniry dept iray mihoatra ny 100 ho tsy an'asa sy amin'ny tsipika tsy an'asa izay andoavanao hetra !!!!
Aug 17, 2007 amin'ny 2: 22 AM
Azoko atao ny maka ny hetraketrako amin'ny haba. Farafaharatsiny, ny hetra dia manandrana hitovy amin'ny vola miditra (raha ny tena izy, manasazy ny manan-karena izy ireo). Ny sarany amin'ny banky dia manasazy ny kilasy antonony sy ambany fotsiny.
Toa mpiasa mazoto ianao izay miahy ny mpanjifanao. Manantena aho fa hahita zavatra tsara kokoa ianao! Tena manao izany aho.